Gadzira Dhairekitori reInternet reWordPress neGravityView | Martech Zone
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi
Kana iwe wanga uri chikamu chenharaunda yedu kwechinguva, iwe unoziva madiro atinoita Giravhiti Mafomu ekuvaka fomu uye kuunganidzwa kwedata muWordPress. Ingori chikuva chakajeka. Ini ndangobva kubatanidza giravhiti Forms ne Hubspot yemutengi uye inoshanda mushe.
Chikonzero chakakosha nei ndichisarudza Mafomu eGiravhiti ndechekuti iri kunyatso chengetedza iyo data munharaunda. Zvese zvinosanganiswa zve giravhiti Forms ichazopfuudza iyo data kune yechitatu-bato system. Izvi ndizvo zvinofanirwa kune vatengi vangu… Ini handidi kuti data rirasike kana wechitatu-bato API rikadzika kana paine imwe mhando yekusimbisa nyaya. Mazhinji mafomu ekutaurirana akapusa pamusika haangoite izvozvo.
Pamusoro pezvo, nematurusi akaita seReCaptcha neGoogle Mepu anoshanda kunze kwebhokisi, ingori sisitimu yakasimba. Ini ndakatenga risingagumi saiti rezinesi makore apfuura uye ndanga ndichirishandisa kune ingangoita mhinduro inogoneka yaungafungidzira.
Maitiro Ekuratidza Giravhiti Mafomu Dhata?
Giravhiti Fomu chishandiso chakajeka chekuchengetedza data… asi ko kana iwe uchinyatsoshuvira kuratidza iyo data pane yako saiti? Ini ndakagadzira mamwe macalculator epamhepo evatengi vakaita izvi, uye raisava basa rakareruka. Ini zvakare ndakagadzira chigadzirwa chekufambisa chinoratidza dhata remukati kune admin… zvaive chaizvo basa.
Zvakanaka, gamuchirai GravityView! GravityView ndeye WordPress plugin iwe yaunogona kushandisa kushambadza yako Gravity Mafomu data. Izvo zvinonakidza - uye zvakatowana chikomborero cheGravity Fomu semhinduro inodiwa.
Kuvaka dhairekitori repamhepo kungori nyore! Gadzira fomu yekutora ruzivo, wobva wavaka mamapu uye dhairekitori rondedzero inoratidza iyo data ... pasina kunyora tambo imwe chete yekodhi!
GravityView inopa kugona kuvaka maonero asingagumi, kubvumidza uye kuramba zvinyoro vasati vaenda kunogara, uye zvinogonesa kugadzirisa kweanopinda kubva kumberi-kumagumo. Sanganisa WordPress, Gravity Mafomu, uye Gravity View, uye iwe une zvakakwana kugona zvemukati manejimendi sisitimu iyo inogona kuunganidza uye kuratidza data zvisinei iwe zvaungade.
Dhata inogona kutaridzwa senge zvinyorwa, matafura, matafura edata, kana kunyangwe mumamepu.
GravityView inoshanda sei?
Gadzira fomu - Kutanga, gadzira fomu ne Giravhiti Mafomu, akanakisa mafomu plugin yeWordPress. Wedzera minda kune fomu uye usimbise pane yako webhusaiti.
Unganidza data - Wobva wazadza fomu. Dhata rako richachengetwa pa kumashure kumagumo yewebsite yako, mukati meGravity Fomu plugin.
Dhizaina marongero ako - Gadzira yako yakakwana dhizaini uchishandisa yekudhonza-uye-kudonhedza interface. Sarudza kuti ndedzipi nzvimbo dzekuisa uye kupi kwekuzviratidza. Hapana kukodha kunodiwa!
Wedzera iyo kune yako saiti -
Pakupedzisira, pinda uye woratidza data rako kumberi kwekupedzisira kwewebhu webhusaiti. Iwe unogona kutarisa kana kugadzirisa zvinyorwa usati waenda kuburikidza neiyo WordPress menyu.
Disiki: Ndiri kushandisa yangu ehukama zvinongedzo zve giravhiti Forms uye GravityView munyaya ino.
Tags: affiliateunganidza datatafura yedatagoogle Mapsmafomu egiravhitigravityviewhubspotonline dhairekitorimepu dzemepu